Gira fitambaran-tsofina TURBO MULTIPLICATEURS mpanamboatra boaty mpanamboatra
Fitaovana miharo volo TURBO MULTIPLICATEURS
Lalana miakatra ny haingam-pandeha haingana ho an'ny fampiharana avo lenta
Ambongadiny, fampitomboana haingana
Mianara momba anay.
Fanomezana hafainganam-pandeha Gearbox
Fitaovana miharo volo sy Multiplicateure Turbo
Haingam-pandeha novolavolaina amin'ny habe maro ho an'ny vokatra sy tsena isan-karazany. Ireo boaty fananganana namboarina dia natao sy namboarina mba handraisana ireo singa voafaritra tsara RPM. Vahaolana haingam-pandeha haingam-pandeha, avy amin'ny mpamokatra boaty famaritana NER GROUP. Fampisehoana avo lenta, boaty mpampisondrotra haingam-pandeha ambany Backlash, izahay no mamolavola sy manamboatra singa marin-toerana: Gears miendrika presida, mpampiakatra haingam-pandeha malaza miaraka amina felatanana flywheel, trano SAE, eny fa na dia vita amin'ny vy aza tsy afa-mihenjana, paompy goavam-bary misy tavoahangy lohan-kazo avo lenta sy mpanondrana hafanana omena , raha ilaina. Fampiharana avo lenta mahazatra ho an'ny mpampitombo haingam-pandeha ho an'ny paompy, mpamokatra herinaratra, mpamaky vato, famatrarana, blender, fandavahana ary chipper.
Gearboxes misimisy kokoa
Manome vokatra avo lenta sy ambany vidy izahay. Ny famolavolana boaty fanamafisana haingam-pandeha izay mety hampitombo ny 12 rpm hatramin'ny 1400 rpm, ny Custom Gearboxes, ny tady avo ary avo lenta kokoa.
Manana ekipa matanjaka izahay hamolavola boaty fanamboarana natao hametrahana singa voafaritra tsara RPM. Kitapo matevina indostrialy haingam-pandeha.
Ny kitapo haingam-pandeha ambony dia singa manan-danja amin'ny fampiharana ilaina. Misy boaty hafainganam-pandeha avo lenta azo alaina rehefa mitombo ny hafainganam-pandeha sy ny fanodinana hafainganana ho an'ny fampiasana an-tserasera tsy an'habakabaka maro, fampiharana indostria
Mitadiava ny Catalog
Mpanamboatra fitaovam-pandrafetana faneva planeta avo lenta sy mahazatra izay ao anatin'izany ny fitomboan'ny hafainganana ho an'ny rafitra indostrialy.
Ireo boaty vita amin'ny fanamboarana manokana ity dia namboarina sy namboarina mba handraisana ireo singa manokana RPM manokana.Ireo ireo fitaovana vita amin'ny haingam-pandeha no nidina ho ao amin'ny zoro sy fametahana ny laharana napetraka amin'ny zoro 90-mari-pahaizana mahomby ary zoro kodiarana fananganana mahomby izay natao ho an'ny torsiana avo lenta. fampiharana tena ilaina
Misy boaty haingam-pandeha avo lenta azo alaina rehefa mitombo ny hafainganam-pandeha sy ny fanodinana hafainganana ho an'ny fampiasana an-tserasera tsy an'habakabaka maro. Ny safidy farany dia manome ny mpampiasa ny fanaovana haavo haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha na haingam-pandeha vita amin'ny haingam-pandeha ambany kokoa.
Manokana izahay amin'ny fanomezana ny mpanjifanay vahaolana amin'ny boaty haingam-pandeha haingam-pandeha. paingotra vatan-kazo mifanitsy, kodiarana tsy mitongilana, faribolana planeta ary kodiarana fizarana herinaratra. Voaporofo fa azo itokisana, azo antoka, mora vidy ary mahomby, Sundyne HMP 7000 paompy mihatra miaraka amin'ny dingana 4 dia manome tombony azo avy amin'ny tsindry mafy: Raha manana ny vokatra tianao indrindra ianao dia avia hifandray aminay! Vonona ary manantena ny fiaraha-miasa izahay. Raisinay ho kalitao ny kalitao ary ny vidiny ambany indrindra dia ny fahatsoram-po. Raha manana fanontaniana ianao dia afaka mifandray aminay, faly izahay manampy anao!